Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Switzerland Akụkọ banyere Rome Burki Childhood Story Plus Ihe Ndị Na-adịghị Eke Ndụ
Anyị Roman Burki Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
N'okwu dị mfe, LifeBogger na-enye gị mmebi nke njem ya site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Na-achọ ịbụ ezigbo onye nnochi ihe mgbaru ọsọ, gị na m maara ya, dị ka David de Gea so na ndị kacha ndị egwuregwu kacha mma n'ụwa niile- Bleacher akụkọ ozugbo enwetara nke ahụ.
Ọzọ, ọ bụghị dị ka ewu ewu dị ka Manuel Neuer or Kepa, ọ bụ naanị ndị egwuregwu bọọlụ ole na ole ga-enwe mmasị ịgụ Rome Burki's Biography nke anyị kwadobere. Ugbu a, na-enweghị n'ihu ịkwado, ka anyị bido.
Akụkọ banyere Roman Burki Child:
Maka aha ndị akụkọ banyere ndụ ha, aha otutu ya bụ “sexy“Ọ bụ ezie na ọ ọ dịghị mgbe ọ na-akpọ onwe ya nke ahụ. A mụrụ onye ọrụ mgbaru ọsọ Switzerland ụbọchị 14th nke November 1990 na nne ya, Karin Burki na nna, Martin Burki, na Münsingen - otu obodo na Switzerland.
Little Roman bịara n'ụwa dị ka nwa mbụ na nwa amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya hụrụ n'anya.
Goalie toro n'akụkụ nwanne ya nwoke nke aha ya bụ Marco Bürki. Brothersmụ nwoke abụọ ahụ, nwere ọdịiche dị afọ nke afọ atọ, abụwo ezigbo enyi site na ụbọchị mbụ.
Dịka nwa mbụ na nwa nwoke nwoke na obere nwanne nwoke nwoke, obere Roman nwere ya, nnukwu echiche nke ibu ọrụ.
Denis Zakaria Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Site na mmalite, ọ malitere ịrụ nnukwu ọrụ nwanne. N'ezie, ilekọta Marco bụ ọrụ mbụ ya dị ka nwanne okenye.
Ka oge na-aga, onye nkwụsị ọdịnihu malitere ịmalite ịmalite ịmalite ịzụ ahịa ezinụlọ Burki.
Responsibility Ọrụ a abụghị ihe ọzọ karịa ịmụ ihe site na nzọụkwụ nna nna ya, nke anyị ga-agwa gị na ngalaba ndị ọzọ nke akụkọ ndụ a.
Nzụlite ezinụlọ Rome Burki:
Ekele diri onye isi ulo (Martin), akara aka nke umu ya nwetara n'isi o kwere mee.
You maara?… Onye na-eche nche na Switzerland (Roman Burki) sitere na agbụrụ ezinụlọ. Nna ya, Martin Burkii bụ onye na-eche nche na nne ya, ikekwe onye na-elekọta ụlọ.
Ndị nne na nna Roman Burkii rụrụ ọrụ n'ezinụlọ etiti. N'ihi ọnụ ala dị ala, ha enweghị ego.
N'ezie, ezinụlọ Martin na Karin so na mmadụ 12,000 bi na Münsingen bi n'otu n'ime ọmarịcha ógbè Switzerland.
Mmalite nke Roman Burki:
N'ihe banyere onye na-agba bọl, onye na-eche nche na-esite na Switzerland. Fọdụ ụfọdụ ndị Fans agaghị ama na ezinụlọ Roman Burki sitere na Münsingen, obodo dị na Switzerland.
Rịba ama, nke a abụghị ka e were ya na obodo German, a na-akpọkwa Münsingen.
Site na eserese dị n'okpuru, ị ga-achọpụta na Münsingen dị na mpaghara Switzerland nke Switzerland.
Ọ dị mma ịsị na Roman Burki bụ onye Switzerland-German na ndị mụrụ ya nwere olu Alemannic. Ndị mmadụ si n'asụsụ a nwere agbụrụ ezinụlọ German na agbụrụ.
N'afọ ndị mbụ Roman Burki- Mmụta na Ọrụ Buildup:
Münsingen bụ ebe ihe niile metụtara akara aka ya bidoro. Dị ka onye bụbu onye nchebe, ọ na-esiri Martin Burki ike ịkwụsị ezumike nká site na football.
Na mbido, nna nwere olile anya ịhụ ụmụ ya nwoke, bido na nke mbụ (Roman), na-achọ ibi ndụ ezinụlọ Burki - ịghọ onye ọkachamara na onye na-eme egwuregwu nke ọma.
Mgbe ọ kwụgidere akpụkpọ ụkwụ ya, Martin Burki were ya n'onwe ya ịkwadebe ụmụ ya maka ọdịnihu.
Nna nwere atụmanya, n'afọ 1999, debara aha obere Roman na FC Münsingen (ụlọ ọgbakọ dị nso na ezinụlọ). N'ebe ahụ, BVB kpakpando n'ọdịnihu tọrọ ntọala ya.
Roman Burki Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
N'afọ 2005, onye isi Switzerland bụ Köbi Kuhn eruru eruola mba ahụ maka World Cup 2006 maka oge mbụ kemgbe 1994. Onye ọ bụla, gụnyere ezinụlọ Roman Burkii, nwere obi ụtọ banyere ọdịnihu nke football na mba ahụ.
Ike obodo nke Switzerland na ihe ndi ozo kpaliri Martin idebanye aha nwa ya nwoke maka ule n'ime ulo akwukwo ama ama ama. N'agbanyeghị nchekwube, ihe agaghị aga mbụ ka emebere ya maka nwa ya nwoke - nke na-eto eto onye mgbaru ọsọ.
Ọdịda nke Mbụ:
Roman Burki nwere ọtụtụ ndakpọ olileanya n'oge ọ bụ nwata. Ọchịchọ ịga n'ihu na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ka mkpa agabigaghị, ọ dịghị ekele maka ule ịgba bọlbụ dara.
N'etiti klọb ndị dara ya, nke kpatara mwute dị ukwuu bụ FC Thun, otu ndị otu egwuregwu bọọlụ Switzerland si n'obodo Bernese Oberland nke Thun.
Ahụhụ site na Ahụike Uche na otú Nna ya si zọpụta Ọrụ Ntorobịa Ya:
Anyị bụ ndị egwuregwu bọọlụ agaghị ahụ ya na uwe BVB ma ọ bụrụ na papa ya etinyeghị aka site na ịchọta onye nkuzi uche nke nyeere ya aka iwepụ uche ya na nrụgide nke agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ.
Eziokwu bụ, Burki nwere nsogbu ahu ike, ya na nna ya zobere oru yar.
Mkpebi a mere ka ndị nne na nna Roman Burki were onye nkuzi uche were mee ka nrọ ezinụlọ dịrị ndụ.
Ihe omume a wetara olile anya- oku sitere na BSC Young Boys (otu egwuregwu egwuregwu Switzerland kacha elu nke nwere isi na Bern) bụ onye kpọrọ nwa okorobịa na-eche nche maka ule.
Roman Burki Biography - Uzo a ma ama Akụkọ:
You maara?… Abalị abụọ tupu onye isi ọdịnihu ga-anwale ọnwụnwa ya na BSC Young Boys, onye Rome nke anyị nwere chigharịkwuuru nna ya, bụ onye dugara ya na ngalaba ụlọ ọgbakọ ahụ wee kwuo, dịka EuroSport si kwuo.
Nna,… Mba, aga m eso ndi Young Boys. Kedu ihe kpatara ị jiri sị Ee? … Jụrụ nna ya, Martin.
Bürki gwara nna ya na ọjụjụ ọ jụrụ na mbụ na FC Thun emeela ka ọ daa mbà, na-eme ka ọ ghara ịmalite ije ọrụ. N'ihi ya, ọ na-enye Young Boys ngọngọ ma kwụsị ịhapụ ịgba bọl.
Obi dị m ụtọ na ọ dịịrị ndị nne na nna Roman Burki na ndị ọzọ ọ hụrụ n'anya na nkwonkwo idozi uche nwa okorobịa ahụ tupu o kpebie ịga n'ihu ikpe na Young Boys.
Roman Burki Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
N'ịbụ ọ theụ nke ezinụlọ na ndị enyi, obere bọọlụ gafere ule nwa okorobịa nwere agba efe.
Site na 2005 ruo 2008, Bürki nọ na agụmakwụkwọ ha. Ọ gụsịrị akwụkwọ na 2009 wee sonyere ndị isi otu egwuregwu ozugbo ọ malitere ịchụ ọtụtụ àjà.
Otu o siri gaa nke ọma:
Ga n'ihu na mbinye ego na ịnyefe na Grasshopper (nnukwu ụlọ ọgbakọ Switzerland ọzọ) bụ mkpebi kachasị mma Roman mere n'oge.
Agbanyeghị, nnukwu bọọlụ bọọlụ ya gbara na Switzerland na-enyere ndị otu Grasshopper aka ka ha merie Switzerland Cup na 2013.
Iji nyere ndị otu ya aka ime nke ọma, Burki ji ọgịrịga gbajiri na akwara afọ na-egwuri egwu.
Ihe nkiri a dugara na mbufe German. N'oge a, Roman hapụrụ obodo ya, nne na nna ya na ndị ezinụlọ ya na nke mbụ ya na Germany ebe ọ sonyere SC Freiburg.
Otu afọ mgbe e mesịrị, na 2014, Thomas Tuchel kpọrọ ya na Borussia Dortmund. N'oge a na-etinye akụkọ ndụ Rome Bürki, o nweela German DFB Cup aha ya.
Ndị ọzọ, dịka anyị na-ekwukarị, bụ akụkọ ugbu a.
Roman Burki Love Life - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Childrenmụaka?
Nke mbụ, ọ dịghị ịgọnarị eziokwu ahụ bụ na ọmarịcha mma ya agaghị adọta ụmụ nwanyị ndị ga-akpọ onwe ha ndị nwere ike ịbụ enyi nwanyị na nwunye.
Na ikpe site na foto dị n'okpuru, ị ga-ekwenye na aha aha ya- sexy. Na ngalaba a, anyị ga-enye gị nkwụsị nke ndụ ịhụnanya Roman Burki.
Mgbe ajụrụ ya echiche ya maka nke ya nwanyị rọrọ nrọ, enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye, Roman Burki kwuru ihe ndị a dị ka Schweizer-ihe ngosi.
Anaghị m ahọrọ otu ụdị, mana ọ kwesịrị inwe ihu ọchị, n'ihi na anya ahụ bụ ihe mbụ na-ejide anya gị ma kpalie mmasị.
Achọrọ m onye nwere mmasị na m dị ka mmadụ ma ọ bụghị dị ka onye ụkwụ ukwu.
Roman Bürki mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Akụkọ ihe mere eme- Nwanyi gara aga na Nwanyị Ugbu a
Nke mbu, onye mgbaru ọsọ malitere inwe mmekọrịta nwa oge na 2010. Ọ malitere site na mkpakọrịta nwoke na nwanyị Nastassja Beutler, onye na-egosi na ọ bụ enyi nwanyị mbụ ya na onye nwere obi ụtọ oge ọ bụ nwata. Ha abụọ zukọrọ ma hụ ibe ha n'anya n'ụlọ akwụkwọ na-anya ụgbọ ala na Bern, Switzerland.
Mgbe Bürki kwagara na BVB, nsogbu malitere n'etiti nnụnụ ịhụnanya abụọ, enweghị ekele maka mmekọrịta dị anya. N'ụzọ dị mwute, Roman Bürki kewapụrụ ya na enyi nwanyị ya nlereanya gburugburu 2016 (dika akụkọ Sten si kwuo).
Asịrị nwere na mgbe ọgagharịrị, onye mgbaru ọsọ mara mma banyere ụbọchị na ihe nlere na blogger nke aha ya Chiara Bransi- enyi ya nwanyị nke abụọ.
Agbanyeghị, n'oge a na-ekepụta akụkọ ndụ Rome Burki, Mr Handsome na-enwe mmekọrịta ugbu a na mma German nke aha ya. Marlen Valderrama-Alvaréz.
Site na ngosipụta niile, ọ na-egosi Marlen O yikarịrị ka ọ ga-abụ nwunye Roman Burki na nne nke ụmụ ya. Nwatakịrị nwanyị ahụ sitere na Southern Germany, ọ bụ onye nwere ahụike nke na-ekerịta vidiyo mgbatị ahụ na Instagram.
Marlen Valderrama-Alvaréz odi ka odi Cathy nso Matt Hummelsnwunye. Ọzọkwa, Melanie Windler, onye bụ uwe obi Manuel Akanji.
Ndụ Roman Burki Nkeonwe:
Ee, eleghị anya ị mara ya maka ịdị mma ya na ihe ngosi ndị na-akpali akpali.
Agbanyeghị, ihe ị nwere ike ịmaghị bụ ụzọ Roman si ebi ndụ na mpụga bọọlụ ma ọ bụ ụdị onye ọ bụ.
Nke mbụ, onye nchebe nwere akụkụ dị nro maka ụmụ anụmanụ n'agbanyeghị na ọ dị oke ike na post mgbaru ọsọ. O kwuru otu ihe mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ.
Mgbe m gụrụ gbasara ọnwụ bea n’ogige anụ ụlọ na Bern, o wutere m nke ukwuu. Ọzọkwa, ụwa fọrọ nke nta ka m daa ogbenye mgbe otu n'ime nwamba nke nne m nwụrụ nwụrụ.
Dị ka ụfọdụ ndị ji egwu egwu hụrụ ụmụ anụmanụ n’anya, onye mgbaru ọsọ BVB nwere obere nkịta nke ọ na-akpọ Cliff. Ọ bụrụ na ọ gụghị akwụkwọ ma na-ege pọdkastị, o yikarịrị ka Roman ọ ga-anọnyere nkịta ya.
Banyere ihe mara mma / Mara mma ya:
Obi abụọ adịghị ya, Switzerland bụ onye mgbaru ọsọ kachasị mara mma n'ọgbọ ya. Na ndụ nke ya, Rome Burki na-eji ihe akpọrọ ihe, ọdịdị ya ma ọ bụ na egbe ma ọ bụ oge ọ bụla ọ hapụrụ ụlọ ya. N’okwu ya;
Achọrọ m iyi ihu ọma mgbe m nọ n'ihu ọha. Tupu m pụọ n'ụlọ, m na-ele onwe ya n'enyo. Mana nke a bụ ihe mere egwuregwu bọọlụ ọ bụla n'ụbọchị ndị a.
Atụmatụ ezumike nka bọọlụ:
N'ikpeazụ, na ndụ nke Burki ya, ndị Switzerland hụrụ n'anya ịbanye na azụmaahịa ụlọ mgbe ọ kwụsịrị akpụkpọ ụkwụ ya. Roman Burki kacha amasị Mats Hummels nwere ike ịbụ ezigbo onye ọchụnta ego.
Roman Burki Web Ndụ:
Gwọ ọnwa BVB nke € 200,000 na ụgwọ ọnwa nke € 2.77 nde karịrị nkea iji mee ka Onyenchekwaebumnobi bi ndu okomoko.
Iji kọwaa ụdị ndụ Roman Burki, naanị anyị ga-agwa gị gbasara ụgbọ ala ya na ọnụ ahịa ya. Ugbu a, ka anyị bido n'ụgbọala ya.
Arsgbọala Rome Burki:
Eziokwu bụ, ndị Switzerland nwere ntụpọ dị nro maka jụụ na nnukwu wiil. Roman Burki na-ahọrọ mgbakwasa iji kwekọọ na Mercedes Benz G-Class okomoko SUV.
Nhọrọ ụgbọ ala na-adabere n'ụdị ejiji ya, ụgbọ ala ọ bụla nwere aha aha ya na ụbọchị ọmụmụ ya na aha ya.
Roman Burki Net Mara:
Obi abụọ adịghị ya, a kwụrụ nde 2.77 nde kwa afọ kemgbe 2017. Maka nke ahụ, ndị ọkachamara banyere ego na-aga n'ihu ịkọ atụmatụ nke uru ya ruru $ 7 nde. Ideringtụle nkwekọrịta ọhụụ ya na June 2020, uru a ga-abawanye.
Ndụ Ezinaụlọ nke Rome Burki:
Site na oge mbụ nke ndụ ya, Roman Burki na-adabere na mama ya na nna ya, ọbụna nwanne ya nwoke, Marco maka nkwado.
Foto dị n'okpuru ebe a bụ ezinụlọ ya dị n'otu ka ha na-enwe obi ụtọ gbaa na ụlọ Switzerland ha- ebe ihe niile malitere.
Ndụ ezinụlọ Roman Burki. Ezigbo ezinụlọ na-enwe obi ụtọ na foto dị n'ụlọ ha - ebe ebe ihe niile malitere (ihe ịga nke ọma).
N'akụkụ nke mmetụta uche a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị nne na nna Roman Burki yana ndị ezinụlọ ya. Ugbu a, ka anyị bido site na nna ya, Martin.
Banyere Nna Roman Burki:
Dị ka ndị Switzerland si kwuo, nna ya Martin nyere ya onyinye kasịnụ onye ọ bụla ga-enye nwa nwoke ma ọ bụ onye ọ hụrụ n'anya.
Onyinye a abụghị ihe ọzọ karịa omume nke ikwere na ya, karịsịa n'oge ọ fọrọ nke nta ka ọ kwụsị ịchọta ọchịchọ ịghọ ọkachamara ọkachamara.
Enweghị nna Roman Burki- Martin, ọrụ agaghị ekwe omume. Ọ dị ka ya na nwa ya nwoke nso. Martin, bụ ụdị nna nke n'agbanyeghị na nwa ya nwoke nwere ihe ịga nke ọma, ọ ka na-akpọ oku na ekwentị iji nyochaa ebe isi awọ nke egwuregwu ya.
Banyere mama Roman Burki:
Ezigbo nne mụrụ ụmụ nwoke na-aga nke ọma, Karin abụghịkwa otu. Roman anaghị ekwu okwu banyere mama ya, n'agbanyeghị na ọ naghị echefu ịdebe foto ya n'oge nne.
Karin Burki na-echeta ihe kachasị mma ọ bụ nwata, n'ihi nnukwu nlekọta nne ya nyere ya mgbe ọ bụ nwata.
Banyere Nwanne Roman Burki:
Marco Bürki, amuru na abali iri nke abali Julai 10 bu kwa onye Swizaland na eme egwuregwu dika aka-ekpe di azu.
Ka m na-ede akụkọ ndụ a, onye ikpeazụ a mụrụ n'ezinụlọ Bürki na-agba bọl na FC Luzern, klọb egwuregwu nke dị na Switzerland obodo Lucerne.
N'adịghị ka nwanne ya nwoke, Marco Burki abụghị onye a ma ama, ọ bụghịkwa onye na-elekọta ezinụlọ.
Ka o sina dị, ịgbaso nzọụkwụ nke nna ya na nnukwu bro, Roman mere ka ọ nwee ihe ịga nke ọma. Dị nnọọ ka Roman, Marco sonyekwara Young Boys wee ruo ebe ọ ga - emeri 2017 / Super League na klọb.
Eziokwu nke Roman Burki:
Ee, ọ ga-abụrịrị na ị maara Switzerland dị ka onye na-eche nche mara mma ma mara mma nke nyeere BVB aka ịma aka megide Bayern Munich.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ụfọdụ Roman Roman Burki Eziokwu a ma ama. Ugbu a ka anyị bido.
Eziokwu # 1- Ọ bụ onye a wakporo BVB Bus bus- Nwoke kpatara nwetara Afọ 14:
Na 2017, Sergei Wenergold mere ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche. Onye German sitere na ezinụlọ Russia zoro bọmbụ na-atụnye na ntụtụ ọla, iji mee ka ndị egwuregwu BVB ụjọ.
N'ụzọ dị mwute, bọmbụ n'okporo ụzọ gbapụrụ dịka bọs klọb nke nwere Roman Burki, gafere ogige na ụzọ ya na asọmpi Njikọ Njikọ nke ikpeazụ.
Agbanyeghị na onweghị ndụ furu efu, mana enwere mmerụ abụọ. Roman Burki nwere nsogbu ihi ụra ụbọchị ole ihe ahụ gbawachara. Anyị na-ekele Chineke maka mgbake ya.
Eziokwu # 2- Ebumnuche kpatara egbugbu Roman Burki:
Switzerland nwere ọtụtụ Tattoos mara mma, nke na-enye aka na ọmarịcha ya. Ọbụna na-enweghị nlezianya anya, ị ga-ahụ na ya toned nwere ọtụtụ nkà nke anụ ahụ. Roman Burki kwuru otu mgbe, mgbe a jụrụ ya ihe kpatara o ji nwee nnukwu mmasị na igbu egbugbu. N’okwu ya;
Abịara m egbu egbugbu n'ihi na m na-aga n'ọhịa; anyị ga-ewepụrịrị mgbaaka na olu nile. Ngwuta ahu bu ihem.
N'oge ahụ, mgbe ọ dị afọ iri na ụma, nne na nna Roman Burki nyere ya nkwado maka eserese mbụ ya.
Bọchị ndị a dị ka okenye, ọ naghị ajụ echiche ha. Onye Switzerland ndị na-agba ọsọ bọọlụ nwere olile anya iwepu ụfọdụ egbugbu ya mgbe teknụzụ na-enweghị mgbu na-apụta- nke ọ na-eche ga-abịa n'ọdịnihu.
Eziokwu # 3- Roman Burki's Religion:
N'etiti egbugbu ya, e nwere Meri na Jizọs na aka. Nke a na-egosi n'eziokwu na nne na nna Roman Burki zụlitere ya n'ịgbaso okwukwe Katọlik nke okpukpe ndị Kristian.
Ndị Switzerland zara otu oge mgbe a jụrụ ya ma ọ ga-aga ụka kwa izu. N'okwu ya;
Anaghị m aga chọọchị kwa izu. Ma ekweere m n'ụkpụrụ ụfọdụ, ọkachasị nke na-ekwu na ị kwesịrị ị na-emeso ndị ọzọ otu ịchọrọ ka esi meso gị. Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na enwere ụgwọ ọrụ maka ime ihe ọma.
Eziokwu # 4- Igwe nkwụ ụgwọ ụgwọ n'ọrụ ma e jiri ya tụnyere nke Nkezi:
Kwa Afọ 2,944,087 CHF € 2,765,208 £ 2,503,799 $ 3,091,941
kwa ọnwa 245,341 CHF € 230,434 £ 208,649 $ 257,662
Kwa Izu 56,530 CHF € 53,095 £ 48,076 $ 59,369
Kwa .bọchị 8,075 CHF € 7,585 £ 6,868 $ 8,481
Kwa elekere 336 CHF € 316 £ 286 $ 353
Kwa Nkeji 5.6 CHF € 5.2 £ 4.7 $ 5.8
Kwa nke abụọ 0.09 CHF € 0.08 £ 0.07 $ 0.09
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Onye Roman Burki'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
You maara?… Nkezi German nke na-akpata 3,770 euro kwa ọnwa kwesịrị ịrụ ọrụ opekata mpe afọ ise na otu ọnwa iji mee ka Burki's BVB ụgwọ ọnwa kwa ọnwa nke € 230,434 (2019 stats).
Nke abuo, ebe ulo ndi Burkii nke Roman sitere (Switzerland), nwa amaala ndi natara 6'502 CHF kwesiri iru oru rue afo ato na otu onwa ka ha kwuo ugwo onwa ya nke ruru 245,341 CHF.
Enyocha Njikọ Rome Bürki
Aha n'uju: Onye Roman Bürki.
aha otutu: Sexy.
A mụrụ: 14 Nọmba Nọvemba 1990 na Münsingen, Switzerland.
Ndị nne na nna: Karin Burki (nne) na Martin Burki (nna).
Ezinụlọ Ezinụlọ: Switzerland-German nke olumba Alemannish.
Ụmụnne: Otu nwanna aha ya bụ Marco Bürki.
Mmekọrịta Mkpa: Nastassja Beutler na Chiara Bransi (Ex-Grilfriends).
Nwunye: Marlen Valderrama-Alvaréz.
Ogo n'ogo na igwe: 1.88 mita ma ọ bụ 6 ft 2 sentimita.
Ihe omume: Na-agụ akwụkwọ ma na-ege ntị pọdkastị.
Mmụta Bọọlụ Bọọlụ: FC Münsingen na Bomụaka Na-eto Eto.
Nnukwu Tattleomi Ọnọdụ Sergio Ramos.
Egwuregwu Role Model: Manuel Neuer.
Na nchịkọta, anyị amụtala na nne na nna Roman Burki (ọkachasị nna ya) bụ naanị ihe kpatara ihe ịga nke ọma ya taa.
Edemede a na-akuziri anyị na ndị mmeri anaghị akwụsị, ndị Quitters anaghịkwa emeri. Anyị nwere olile anya na ọ masịrị gị. Ọ bụrụ na inwere, jiri obiọma gwa anyị ihe ị chere gbasara edemede anyị na onye na-eche nche na ngalaba nkọwa.